फिल्मबाट चर्चित हुन नसकेकी यी नायिका एउटै गितको भिडियोले बनायो हिट, कुन गित होला? हेर्नुहोस भिडियो – TAJA KHAWAR
फिल्मबाट चर्चित हुन नसकेकी यी नायिका एउटै गितको भिडियोले बनायो हिट, कुन गित होला? हेर्नुहोस भिडियो
December 13, 2018 Taja Khawar कला/मनोरंजन 1
काठमाडाै‌ । हिजो आज एउटै गीतले बजार पिटेको छ त्यो हो कुलेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु माझीको स्वर रहेको ‘सालको पातको टपरी हे बराई …..’गीत । यसै गीतको भिडियोमा अभिनय गरेकी नायिका मरिस्का पोखरेललाई अचेल भ्याई नभ्याई छ । फिल्मले दिन नसकेको चर्चा एकै गीतले दिलाएको छ । के म तिम्रो होइन ?, लम्फूु, पण्डित बाजेको लौरीु, मिस्टर भर्जिन, साली कस्को भेनाको लगायत फिल्म प्रदर्शनमा आइसकेका छन् तर उनले अभिनय गरेका यि कुनै फिल्म हिट हुन सकेनन् र उनी आझेलमै थिइन् ।
आधा दर्जन बढि फिल्ममा काम गरेर पनि आफूलाई अभिनेत्रीको रुपमा चिनाउन नसकिरहेको अवस्थामा उनलाई अहिले १४ मिनेट २३ सेकेण्डको एक लोक दोहोरी भिडियोले निकै चर्चा दिलाएको छ । हाल ‘सालको पातको टपरी…’ गीतले करोड क्लब कटाइसकेको छ र यसको रफ्तार अझै बढ्दो छ ।
भिडियोमा मरिश्कालाई गायक कुलेन्द्र र बसन्त थापाले साथ दिएका छन् । ६८ हजार लाइक्स मिलेको भिडियोमा ५ हजार बढी कमेन्ट गरिएको छ । धेरै जसो कमेन्टमा मरिश्काको अभिनय तथा उनको शुन्दरताको तारिफ गरिएको छ । यस गीत पछि अब उनको करियरले नयाँ मोड लिने चलचित्र बृत्तमा चलेको छ ।
अहिलेसम्म अभिनयले दिलाउन नसकेको चर्चाले फुरुङ्ग मरिस्काको यतिखेर देश विदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा माग बढेको छ र यसै शिलशिलामा हाल उनी बेलायत पुगेकी छिन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
पाथीभरा माताको तपाईं पनि दर्शन गर्नुहोस, इलामको बरबोटेमा पाथिभरा दर्शन गर्नेको यस्तो भिड देखियो
मिस वर्ल्डबाट नेपाललाइ चिनाएकी शृङ्खलाले मध्यराती टेकिन नेपाली भूमिमा, उनी आउदा उर्लियो जनसागर,
अत्यन्तै दु:खद खवर, बस र स्कार्पियो ठोक्किँदा बेहुलाका बाबुआमासहित ६ जनाको मृत्यु, नामसहित – News M